६१ जनाको नाम सुचिबाट हटाईयो – Click Khabar
६१ जनाको नाम सुचिबाट हटाईयो
२०७६, ९ पुष बुधबार0
चितवनः जिल्लामा रहेका ६१ जना भूकम्प प्रभाबितको नाम सुचिबाट हटाउन स्थानीय तहले सिफारीस गरेका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्बाधार भरतपुर चितवनका अनुसार भूकम्प प्रभाबितहरु मध्ये २ जनाको प्रथम किस्ता बापतको रकम फिर्ता गर्न कबुलियतीनामा प्राप्त भएको छ ।
नाम सुचिबाट हटाउन सिफारीस हुनेहरुमा दोहोरो नाम परेका, लाभग्राहीहरु वडामा सम्पर्कमा नआएका, घर पुनर्निमार्ण नगर्ने सोचमा रहेका, भूमिहिन भएका, सार्बजनिक जग्गामा पहिला देखिनै बस्दै आएका रहेको कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । कार्कीका अनुसार सुचिबाट हटाउन सिफारीस गरिएकोमा खैरहनी नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र ईच्छाकामना गाउँपालिकाका रहेका छन् । यस्तै भूकम्प पछि प्राबिधिकहरु नखटिदैं निर्माण सम्पन्न भएका ३१ घरको विषयमा कार्यालयले केन्द्रमा पठाएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा पाँच सय ९६ जना भूकम्प प्रभावित थपिएका छन् । कार्कीका अनुसार थपिनेमा ३ सय ७ जना पुननिर्माण तर्फ र २ सय ८९ जना आंशिक क्षती तर्फ रहेका छन् । कार्यालयले गत जेठ मसान्त सम्म लिएको गुनासोका आधारमा उनीहरु लाभग्राहीको सूचिमा थपिएको हो ।
कार्यालयका ईन्जीनियर सुजन नेपालका अनुसार सो समय सम्म ९ हजार ५ सय ६९ जनाको गुनासो केन्द्रमा पठाईएको थियो । त्यही मध्येबाट प्राधिकरणले लाभग्राही थप गरेको हो । उहाँका अनुसार थप भएका लाभग्राहीहरुकोमा प्राबिधिक जाने काम सुरु भएको छ ।
यस्तै कार्यालयले जिल्लाको पुननिर्माणको ६९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । ७ हजार ४ सय ६० लाभग्राही मध्ये ४ हजार ७ सय २२ जनाले तेस्रो किस्ता बापतको रकम निकासा गरिसकेका छन् । यस्तै दोस्रो किस्ता बापतको रकम ५ हजार ६ सय ८ जनाले लिई सकेका छन् । पहिलो किस्ता सम्झौता गर्नेको संख्या ६ हजार ७ सय ८४ रहेको छ ।
लाभग्राहीको संख्या थप भई ७ हजार ७ सय ६७ पुगेको छ । उनीहरुले पहिलो किस्ता बापत रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता बापत रु १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता बापत रु १ लाख प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै आंशिक १ हजार ४६ मध्ये ६ सय ५४ जनाको रकम निकासा भई सकेको छ । आंशिक तर्फ लाभग्राही १ हजार ३ सय ३५ पुगेको नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
आंशिक रुपमा क्षेती भएकाहरुको हकमा प्रवलिकरणको काम गर्न कठिन भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई भवनका ईन्जिनियर सुबास न्यौपानलेले जानकारी दिनुभयो । न्यौपानेका अनुसार प्रबलिकरणमा परेका घरका घरधनिहरुनै नयाँ घर निर्माणका लागि तयार हुने तर प्रवलिकरणका लागि तयार नहुने गरेका कारण समस्या आएको हो ।
प्रबलिकरणका लागि रकम निकासा भएकोभए पनि काम भने जम्मा तीन वटा घरमा मात्रै काम भईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अन्यको लगत प्रथम किस्ता बापतको रकम फिर्ता गर्न कठिन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा वि. सं. २०७२ सालमा आएको भूकम्पका कारण ८ वटा वस्ति असुरक्षित रहेको पाईएको छ । जसमा १ सय १ घरधुरी असुरक्षित रहेका छन् । उनीहरुमध्ये ६२ घरधुरीलाई सुरक्षित बस्तिका लागि जग्गा उपलव्ध गराईएको छ । ३८ घर धुरी अझै जोखिम स्थानमानै वसोबास गर्दै आएको कार्यालयको तथ्याङ्कले जनाएको छ । एक घर धरीलाई स्थानान्तरणको प्रकृयामा अघि वढाईएको छ ।
बसको ठक्करबाट साईकल यात्रीको मृत्यु
Banner Newsअर्थक्लिक खबर विशेषमुल खबरशिक्षा
चितवनमा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय
२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार0
चार सय ६३ जनामा थप कोरोना संक्रमित
२०७७, १४ असार आईतवार0
मुल खबरसुरक्षा अपराध